ध्यानदिनुहोस्, वास्तुशास्त्रले तपाईको भाग्यमा रोकाबट ल्याउँन सक्छ ? – दैनिक नेपाल न्युज
ध्यानदिनुहोस्, वास्तुशास्त्रले तपाईको भाग्यमा रोकाबट ल्याउँन सक्छ ?
तपाई नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने वास्तुशास्त्रलाई ध्यान दिनुहोस् । यदि तपाईको जीवनमा सोचे जस्तो सफलता हात लागि रहेको छैन भने पनि घरको वास्तु शास्त्रमा ध्यान दिनुहोस् । तपाई घरमा कुन दिशामा फर्किएर खाना बनाउँनुहुन्छ ? कता फर्किएर खाना खानु हुन्छ ?
१, उत्तर दिशा तर्फ फर्किएर खाना पकाउनाले व्यवसाय घाटामा जान सक्छ । साथै धन सम्पति नोक्सानी पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ ।
२, दक्षिण-पश्चिम दिशा तर्फ फर्किएर खाना बनाउदा घरको सुख शान्ति भङ्ग हुन्छ । घरमा लडाई झगडा हुने सम्भावना बढ्छ ।
३, पश्चिम दिशा तर्फ फर्केर खाना बनाउदा घरका सदस्यको अनुहार र हड्डी सम्बन्धि रोग हुने डर हुन्छ ।
४, दक्षिण दिशा पट्टि फर्किएर खाना पकाउदा घरका महिलाहरुले अनेकौ शारीरिक समस्या भोग्नु पर्ने हुन्छ ।
५, वास्तुशास्त्रअनुसार घरमा सुख शान्ति बचाई राख्न र रोगहरुबाट बच्नको लागि पुर्व दिशा तर्फ फर्केर खाना बनाउनु उत्तम मानिन्छ ।
६, किचेनको झ्याल यदि पुर्व दिशा पट्टि छन् भने वास्तुशास्त्र अनुसार एकदम राम्रो मानिन्छ ।
७, ननुहाईकन खाना पकाउनु हुदैन सकेसम्म खानु पनि हुदैन । यसो गर्नाले बिरामी हुने खतरा बढ्छ । -एजेन्सी
सिउरुङ गाउँ गए पाँच हजार, बसाए ३० हजार जरिवाना
शनिबारको रात महिलाहरु सबैभन्दा बढी से क्सी देखिन्छन्, कारण यस्तो